कोकाकोला १३३ औं वर्षमा · Aawaj Nepal
कोकाकोला १३३ औं वर्षमा
आवाज नेपाल, २०७६ वैशाख २५ बुधबार
काठमाडौं– आज कोकाकोलाले १३३औं वार्षिकोत्सव मानाएको छ ।
८ मई १८८६ मा शुरु भएको थियो कोकाकोला । जतिबेला एटलान्टाका फार्मासिस्ट डा. जोन एस पेम्बर्टनको उत्सुकता र नेतृत्वमा हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गरेका थिए । यो पेय पदार्थले विश्वभरका मानिसहरुलाई त्यसबेलादेखि रिफ्रेस र उत्साहित गर्दै आएको छ ।
फ्रान्क एम. रोबिन्सनलाई कोका–कोला नामका साथसाथै यसको ट्रेडमार्कको डिजाइन, खास लिपिको सिर्जना गरेको श्रेय जान्छ, जून आजसम्म प्रयोग भईरहेको छ । रोबिन्सन डा. पेम्बर्टनका सहकर्मी तथा लेखा नियन्त्रक थिए । जतिबेला, डा. पेम्बर्टन जसले यो पेय पदार्थको उत्पादन गरे, सोहि बेला श्री एस जी. क्याण्डलर, जसले व्यवसायलाई बिस्तार गर्दै संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाभर फैलाएका थिए ।
कोका–कोलाले नेपालमा सन् १९७९ देखि नै हरेक अवसरका लागि कयौं ब्राण्डको श्रृंखलाका साथमा रिफ्रेस गराउँदै आएको छः जून स्थानिय स्वाद र संस्कृती प्रतिको लगावमा समाहित छ । कम्पनीको शुरुवातीदेखि नै, कोका–कोलाले फुटबल, संगीत तथा खानाका अनेकौं गतिबिधीहरुलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको छ ।
कोका–कोलाले नेपालमा उपभोक्ताहरुका लागि आविस्कारिक सोचहरुलाई अगाडि बढाई अद्धितीय पहुँच तथा अवसर सिर्जना गर्दैै आएको छ । सन् २०१३ मा कोका–कोलाले फिफा र एन्फाको सहकार्यमा फिफा विश्वकप ट्रफी नेपालमा ल्याएको थियो, जून नेपालमा पहिलो पटक वास्तविक सुनौलो ट्रफी प्रत्यक्ष रुपमा फुटबल प्रेमीहरुले हेर्न पाएका थिए ।
कोका–कोला मोःमोत्सवमा, कोका–कोलाले ग्राहकहरुको मनपर्ने कोक र मोःमोको कम्बिनेसनको आनन्द लिएका थिए, जहाँ उनीहरुको मनपर्ने सेलेब्रेटीहरु तथा राष्ट्रिय फुटबल टीमका खेलाडीहरु सहभागी थिए ।
अमेरिकाको टेक्सासमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, २० मारिए, २६ घाइते
तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, दुई सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि